Poultry farming | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Poultry farming
Sakan'ny henam-borona: tombony, tsy fahampiana, singa
Ny tantsaha tsirairay, izay manana ny ankohonany, dia afaka mahazo fanampin'ireo biby manan-danja an-tsokosoko kely an-trano. Misy karazany maro ireo vorona ireo sy ireo torolàlana samihafa. Amin'izao fotoana izao amin'ny fampivoarana ny indostrian'ny zava-manan'aina dia mihoatra ny zato ny isan'ny akoho. Miankina amin'ny tontolon'ny fambolena, dia mizara ho karazana izy ireo.
Inona no antony mahatonga ny mpihaza maty?
Matetika ny akoho amorom-paty dia atsangana any amin'ny toeram-piompiana biby fiompy. Ny tompona dia manatody atody ho an'ny fanosorana menaka. Indraindray ireo tompon-trano dia mividy ny akoho, fa ny ampitson'iny dia mahita ny iray na ny maty. Inona no anton'izao fiantraikany izao, no hiezahantsika hahatakatra ity lahatsoratra ity?
Ny aretim-bozo sy ny fomba fitsaboana azy sy ny fisorohana
Amin'izao fotoana izao, ny fiompiana zana-trondro dia asa tena mahasoa. Kanefa, tahaka ireo biby fiompy rehetra, ny akoho dia mety koa amin'ny aretina isan-karazany. Ny olana lehibe sy manan-danja eo amin'ny fampandrosoana ny fambolena hazan-drano dia ny aretin'ny akoho. Indraindray dia mitranga izany fa misy areti-mifindra mahery vaika, ka noho izany dia tsy maintsy manapaka ny biby fiompy rehetra ianao.
Tena namana tsara ireo razambentsika rehefa nampianatra ny akoho teny an-tokotany izy ireo! Manomboka amin'ny tokotanin'ny tanàna mahazatra, any amin'ny faritry ny fambolena rehetra, dia hanaporofo aminao fa fandraharahana tena mahasoa ity. Ny henam-bary dia tsy vitan'ny sakafo tsy voatery GMO amin'ny taona, fa atody ihany koa. Raha te manomboka mikolokolo akoho ianareo, ary tsy fantatrao hoe inona no karazana safidy, dia ny akoho salmonan'i Zagorsky no tena ilainao.
Androany, ny fiompiana zana-trondro dia fihetsika malaza. Izany dia mamela anao hihinana hafanana, voajanahary, madio ary atody foana. Saingy, raha miresaka momba ny fikarakarana ny akoho Brahma isika, dia hitondra fahafaham-po ho azy koa izany. Mazava ho azy, ity karazana akoho ity dia ny famolavolana ny tsangambaton'ny vorona. Izy ireo dia nanavaka hatrany ny kolontsaina elegant, ny tony, ny voalanjalanja, ny adidy, ny fiaretana.
Mianara mamorona tranom-borona ho an'ny papelika
Ny fambolena sy ny papelika mitombo ao an-trano dia orinasa tena mahasoa. Raha ny zava-misy rehetra, ireo vorona kely ireo dia mandany sakafo kely, nefa miaraka amin'ny atody ihany koa izy ireo ary manome na dia kely ihany aza ny hena, saingy manan-danja lehibe. Tsy misy fahasarotana tanteraka ny tranokely, satria afaka miaina ao an-trano izy ireo, raha manamboatra tranokala manokana ho azy ireo.
Na dia androany aza dia mora ny mahita karazana amboadia sy karazam-borona, izay manavaka ny vokatra tsara, kanefa ny zana-trondro fanta-daza dia tsy mahavery ny maha-zava-dehibe azy. Ny iray amin'ireto dia ny leggy hens, izay fantatra nandritra ny taona maro noho ny toetrany tsara.
Zavamaniry ho an'ny kuchinsky fankalazana
Maro no mandray anjara amin'ny fiompiana akoho, satria tsy raharahambarotra izany, fa ny vokatra dia tena manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana amin'ny teti-bola manokana. Tamin'izany fotoana izany ihany, efa nianatra lesona ny tantsaha moderita ankehitriny fa ny fahombiazan'io orinasa io dia miankina tanteraka amin'ny isan'ireo karazan-tsakafo sy ny fikarakarana vorona, fa amin'ny safidy tsara ihany koa.
Raha misalasala ny mpihinam-bolo ny mpihinam-bolo iray amin'ny fisafidianana vovobony, dia tokony hihaino tsara ny kohinhin izy, izay tsy vitan'ny atody, fa manatsara koa ny masin'ny muscle. Cochinquins dia tena tsara tarehy. Ankehitriny, dia zara raha hita any amin'ny toeram-pambolena fiompy na ao an-tokantrano izy io.
Zava-nisongadina ny fihinanam-bilona mety
Ireo tantsaha mpihinana rehetra izay manapa-kevitra ny hiteraka papelika dia tokony hahatsapa fa ny tena manan-danja amin'ny famboleny dia ny fihinanana sakafo ho an'ny vorona. Raha manao ny zava-drehetra ianao dia hahita fahombiazana lehibe. Ny fihinanana ny fahasalaman'ny vorona dia ny tsy fahampian-tsakafo. Maro ireo tsy fitoviana eo amin'ny tantsaha mpamboly momba ny fihinanam-bilona.
Ventilation ao amin'ny trano henan'akoho, inona izany? Inona no karazana fantsona misy ao?
Ny olona rehetra dia mieritreritra fa ny fanorenana ny trano dia ny zava-drehetra, fa tsy izany, mbola ilaina ny mametraka azy amin'ny fitaovana ilaina. Angamba mieritreritra ianao fa tsy misy sarotra amin'izany, fa ny fananganana lakandrano, ny akaniny, ny fanamafisana sy ny rivotra. Raha manao ny zava-dratsy rehetra ianao na mamela zavatra iray, dia afaka mihazakazaka ny vorona, izay tsy dia tsara loatra.
Ny mpiboboka sy ny mpanamboatra akoho-ko
Ao amin'ny talantan'ny fivarotana rehetra amin'ny fotoana samihafa amin'ny taona dia afaka mividy vokatra vaovao ianao. Tsy hisy olana hividy hena henry. Saingy, ny tantsaha dia mbola mitombo isan-karazany amin'ny zavamaniry sy biby an-trano ao amin'ny efitranony. Hilaza aminao izy ireo fa ny vokatra vokarin'ny vokatra ao an-trano dia mamy sy mahasoa kokoa noho ny any amin'ny fivarotana.
Rosiana fotsy hoditra
Fotoana izao satria ny renim-pianakaviana no mpiara-mitory amin'ny olona eo amin'ny fiainana. Ny karazana akoho, rosianina Rosiana, dia iray amin'ireo zana-pamokarana mahazatra indrindra amin'ireo firenena CIS. Noho ny lazany dia azonao atao ny mihaona aminy amin'ny toeram-pambolena sy ny tokantrano ary ny vokatra ao amin'ny magazay. Mpivarotra nandritra ny 20 taona no nitarika ny fananganana ity karazana ity.
Ny trondro goavam-be boromailala dia ny solontenan'ireo lehibe indrindra. Izany no tena mampiavaka azy ireo amin'ny foko. Ny zaridaina dia nentina tany Amerika ho an'ny fambolena indostrialy. Vetivety izy dia nalaza noho ny fananany tombony tsy azo lavina, noho izany dia tena avo lenta ny tombom-barotry ny fambolena.
Ny gisa tsara indrindra
Nirotsaka tamin'ny gusevodnost ny olona hatramin'ny taloha, ary ankehitriny dia sampana maoderina amin'ny fambolena maoderina. Manerana izao tontolo izao, gisa dia mitombo amin'ny toeram-pambolena tsy miankina sy toeram-pambolena kely, ary ny faharoa dia manan-danja ankoatra ny akoho. Mankasitraka ny hena matsiro izy ireo, ny aty amin'ny aretin-tsakafo (ilay mpamokatra any Frantsa), ny ambany, ny volony ary, mazava ho azy, ny hatsarana.
Famaritana momba ny zana-boromailala malaza indrindra amin'ny fikarakarana karazam-borona Adler
Anisan'ireo karazam-borona maro, karazan-tsakafo sy karazam-borona maro, dia sarotra ny misafidy izay tena mifanaraka aminao. Noho izany, mila mandeha amin'ny anaranao ianao fa amin'ny alalan'ny karazana fitarihana amin'ny vokatra. Raha ny zava-drehetra, dia izao no homenao ny vorona ao an-trano. Ohatra, ny torolàlana malaza indrindra dia ny henan'aina, izay ahafahanao mampifandray tanteraka ny haavon'ny vokatra atody ho an'ny akoho sy ny toetra tena tsara amin'ny akoholahy entin'izy ireo.
Toeram-pardinan'i Poltava: miankina amin'ny famokarana sy ny fikojakojana ny fikojakojana
Amin'ny fambolena biby, ny karazana vaovao dia manatsara ny karazam-biby an-trano, izay noforonina amin'ny ankapobeny amin'ny fiampitana ireo solontena efa misy efa misy. Amin'ny ankapobeny, izany dia atao mba hampitomboana ny vokatra na toetra hafa manan-danja. Rehefa mamboly karazam-borona vaovao, ny anjara asa manan-danja indrindra dia ny toetoetry ny atiny sy ny henany, izay ny fepetra lehibe indrindra amin'ny fisafidianana vorona ho an'ny fambolena fanampiny.
Pikantsary Rhode Island: inona avy ireo fiasa sy tombontsoa azo avy amin'ny sokatra?
Ny fanolokoloana akoho dia tena mahasoa. Raha ny tena izy, noho ireo vorona ireo ao an-tranonareo dia ho atody vaovao sy hena matsiro, izay ambony noho ny kalitaon'ny mpivaro-tsena. Raha ny marina, tokantrano iray dia antoka hatrany amin'ny maha-voajanahary sy ny fitiavan-toetran'ny tontolo iainana, izay miezaka manahaka ny mpividy sy ny manam-pahaizana PR amin'ny fahitalavitra.
Mampitombo ny fikarakarana Fireol amin'ny vokatra tsara isika
Ny nofin 'ny mpamboly mpihinam-bitsika dia toy ny karazana amboadia izay afaka mitondra atody toy izany ary dia nanavaka ny vokatra tsara amin'ny sakafony. Matetika anefa dia tsy fahita firy izany, ary raha manana fahaizana avo lenta ilay vorona, dia mandany ny heriny rehetra, ary ny fitomboan'ny taova dia ratsy sy miadana.
Avy any an-tokotaniny ihany no ahafahanay misintona ny zana-trondro Sussex
Tao an-trano dia nisy akoho nanombantombana talohan'ny niandohan'ny vanim-potoana nisy antsika, noho izany dia maro ny zana-trondro manana tantara lava be, izay tsy misy ifandraisany amin'ny fambolena kanto. Raha ny marina, mba hahazoana henan'omby sy atody bebe kokoa, ny tantsaha fahiny dia niezaka ny mifidy afa-tsy ireo karazana tsara indrindra ary vao manaparitaka azy ireo ihany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Poultry farming